चार्टर विमानको फ्रेट शुल्कमा तीन गुणा वृद्धिले साना तथा मझौला फ्रेट व्यवसायी समस्यामा - Business World
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ १५, २०७८ | १०:१८:४४
न्यु योर्क कार्गो प्रा.लि.
सन २०१९ को अन्तिमदेखि सुरु भएको कोभिड महामारीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाका तालिका नियमित नभइदिँदा निर्यात व्यवसायलाई सहजीकरण गरिदिने साना तथा मझौला फ्रेट व्यवसायी थप समस्या झेल्न बाध्य हुनुपरेको छ । नेपाल उडान भर्ने विदेशी तथा विदेशी विमान कम्पनीमा नेपाली निर्यात योग्य सामान पढाउनका लागि स्पेस बुकिङमा महायुद्धको स्थिति सृजना हुनुमा एकातिर जहाज आउने तालिका थाहा नहुने त्यसमाथि तेब्बर फ्रेट शुल्क वृद्धिले औसत फ्रेट व्यवसायीको समस्या बन्न थालेको छ ।
नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय वाणिज्यमा उच्च सहभागिता गर्ने निर्यात सहजीकरणमा हवाई पारवहन एक महत्त्वपूर्ण माध्यमको रूपमा रहिआएको छ । नेपालको विकट भौगोलिक स्वरूपले स्थल मार्गको दाँजोमा हवाई मार्गभई निर्यातका सामान निश्चित समय भित्र गन्तव्यमा पुग्ने गर्दछ । त्यही हवाई सेवा उपल्वध गराउने बायु सेवा निगम लगायतका नेपालबाट उडान भर्ने अन्तर्राष्ट्रिय गनत्वयका हवाईजहाज कम्पनीहरू व्यक्तिको एकाधिकारमा रहेको महसुस गरिएको छ । किनकि निगमका जहाज उडान तालिका सार्वजनिक हुन छाडेका छन् । लकडाउन सुरु भएदेखि निगमका जहाज उडिसकेपछि मात्र फ्रेट व्यवसायीहरूले थाहा पाउने गर्दछन् । चीन तथा युरोपका हवाई रुटबाट नेपाल आउने तालिका समयमा उपल्वध नहुँदा हवाई फ्रेट व्यवसायी झन् तनाव खेप्न वाध्य हुनु परेको छ ।
चार्टर उडानका सेटिङ मिलाउनेहरूका लागि कोरोना महामारी दशैं जस्तो हर्ष उल्लासमय बनेको छ । सामान आयात÷निर्यातका स्पेस बुकिङ र फ्रेट शुल्कमा विभिन्न व्यक्तिहरूको एकाधिकारले त्यस सञ्जालमा नसमेटिएका साना तथा मझौला फ्रेट व्यवसायीले यस क्षेत्रबाट पलायन हुनुपर्ने स्थिति सृजना हुन थालेको छ । यात्रु उडानका टिकट समेत सेटिङ सञ्जालमा परेपछि फ्रेट क्षेत्रका व्यवसायी र तीनमा आश्रित जनशक्तिको आर्थिक सामाजिक संरक्षणमा सरकारी निकाय मौन रहेको छ ।
लकडाउनको निहुँमा विमान कम्पनीहरूले अग्रिम भुक्तानी सहित फ्रेट शुल्कमा ४० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिएको छ । लकडाउन अघि अमेरिकाको लागि प्रति के.जी कार्गो रु. ५०० शुल्क लाग्दै आएकोमा हाल उही गन्तव्यका लागि रु. ७५० शुल्क निर्धारण गरिएको छ । नेपालबाट अधिक सामान निर्यात हुने युरोपतर्फ साबिक रु.३६० लग्दै आएकोमा हाल रु.८० सम्म थप शुल्क चुकाउन बाध्य पारिएको छ । चीन तथा युरोप क्षेत्रबाट निर्यातको दाँजोमा आयातको आकार झन् उच्च हुँदै गएको तथ्याङ्क देखिन थालेका छन् । आयात भई आएका सामानका उच्च फ्रेट शुल्कले उपभोक्ता बजार मूल्यमा समेत वृद्धि हुँदै गएपनि सरकारी नियन्त्रण भन्दा बाहिर पुगेको छ ।
नेपाल फ्रेट फरवार्डस संघ छाता संगढनमा १२५ बढी सख्ंयामा व्यवसायीहरू आबद्ध रहेका छन् । जसमध्ये अधिकांश साना तथा मझौला फ्रेट व्यवसायीहरू रहेका छन् । वायुसेवा निगम सहितका हवाईजहाज कम्पनीहरूमा देखिएको एकाधिकारले हवाई पारवहनमा आश्रित फ्रेट व्यवसायी र निर्यातकर्ताहरु संकटमा पर्न थालेका छन् । हवाई फ्रेट शुल्क नियन्त्रण सहित जहाज उडान तालिका नियमित गराउन वाणिज्य मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण लगायतका निकाय चुकेको छ । लकडाउनमा हवाई पारवहनमा भएको यस प्रकारको एकाधिकारले सीमित व्यक्तिहरू मौकाको फाइदा लिनमा मस्त छन्, भने सरकार चुनाव गराउनै व्यस्त छ ।